Osabalalayo Drilling Machine | I-Radial Arm Drill Press China Abakhiqizi
Ulapha: Ikhaya1 / Radial Drilling Machine, Radial Arm Drill Press, Abakhiqizi baseChina
I-Tsinfa ingumhlinzeki nochwepheshe we-radial drilling machine e-China.
Lapho ubuciko bokusebenza obuzocutshungulwa bunzima, akulunganga ukuhamba, futhi kunzima ukuthola isikhungo, asifanele ukucubungula kumshini wokubhola mpo noma wokubhola omncane webhentshi. Ngalesi sikhathi kuyadingeka ukusebenzisa umshini wokubhola osabalalayo, indawo yokusebenza ayinyakazi futhi ihambise uthi lokuphotha, ukuze isikhungo sokuphotha sihambisane nendawo yomgodi wokuchofoza. Ibhokisi lokuphotha libekwe engalweni yomsakazo futhi lingahanjiswa eceleni kwesitimela somhlahlandlela wengalo yomsakazo. Ingalo ye-radial ingashintshwa izungeze i-eksisi yekholomu, ngakho-ke indawo yokuphotha ingashintshwa kalula. ingalo ye-radial nayo ingaphakanyiswa futhi yehliswe kukholamu ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokucubungula. Ngemuva kokulungisa indawo yokuphotha, ibhokisi lokuphotha, ingalo esabalalayo kanye nekholomu eqondile yomshini wokubhola osabalalayo kumele icindezelwe ngokuthembekile ngenqubo yawo yokuqinisa, ukuze ithuluzi lomshini lenze uhlelo oluqinile lokuqinisekisa ukuthi ithuluzi lomshini linokuqina okwanele nesimo ukunemba ngaphansi kwesenzo sokusika amandla.
Imibuzo?Sishayele ku- + 86-15318444939, bese ukhuluma nomunye wabachwepheshe bethu.Ungagcwalisa nefomu lethu lokuxhumana
Osabalalayo imishini umshini main umsebenzi isingeniso:
Osabalalayo ingalo imishini umshini ikakhulukazi esetshenziselwa imishini, kuyisicefe, ngokuthepha, bezinhlamvu, countersinking, reaming, Imishini lisetshenziswa kabanzi machining, isikhunta yokukhiqiza kanye nezinye izimboni
Ngokuya ngemodi yokuqinisa nokuhambisa, ihlukaniswe yaba yi-radial mechanical kanye ne-hydraulic radial
Ingalo ye-radial ijikeleza ama-degree angama-360. Ingalo ye-rocker ingahamba iye phezulu naphansi. Isigxobo sekhanda singahamba ngakwesobunxele nangakwesokudla eceleni kwengalo esetshenzisiwe ukuze kubekwe kalula
Isakhiwo esilula, esisebenza kalula.
Osabalalayo imishini umshini video:
Osabalalayo imishini umshini ukudayiswa:
Osabalalayo Ingalo Drill Cindezela u-Z3040
UMax. imishini ubukhulu:40mm
Imoto enkulu (kw): 2.2kw
Osabalalayo Drilling Cindezela Z3050
UMax. imishini ubukhulu:50mm
Imoto enkulu (kw): 4kw
I-Radial Drilling Press Z3063
UMax. imishini ubukhulu:63mm
Imoto enkulu (kw): 5.5kw
Osabalalayo Ingalo Drill Cindezela Z3080
UMax. imishini ubukhulu:80mm
Imoto enkulu (kw): 7.5kw
Radial ingalo sokuprinta sici:
Ukuvumelana okuphezulu kokuthwala kokuphotha
I-Fuselage cast iron inamandla amakhulu
Idizayini yesisindo esiyisisekelo
Ungawusebenzisa kanjani umshini wokubhola osabalalayo
1 Isisekelo esilungisiwe. Amamodeli angenhla kwe-Z3050 kumele aqinisekise ukuthi isisekelo siqinile ukugwema ubungozi bokulahla.
2 Hlanza uwoyela wokulwa nokugqwala ezintweni zokusebenza bese uhlola inani lamafutha engxenyeni yokuthambisa
3 Vula, cindezela inkinobho enkulu yamandla, ugesi kuzo zonke izingxenye zethuluzi lomshini, lungela ukusebenza kwethuluzi lomshini, cisha iswishi, ithuluzi lomshini livaliwe. Qinisekisa isisekelo esinokwethenjelwa sethuluzi lomshini.
4 Hlola ukuthi ukulandelana kwesigaba samandla kulungile ngezinkinobho zokuphotha eziya phambili neziphindayo. Uma kuphambene, shintsha noma iyiphi intambo yamandla emibili
5 Lungisa okusebenzayo kusisekelo bese ulungisa into yokusebenza. Faka i-drill bit, bese uphakamisa ingalo ebushelelezi ebude obufunayo, vula i-handwheel, ulungise i-headstock endaweni oyifunayo, ukhiye ingalo ye-radial kanye ne-headstock, kuya ngohlobo lwemishini, usebenzisa i-hydraulic noma i-mechanical locking.
6 Sebenzisa inkinobho yokuphakela ukucubungula.
7 Imishini inohlelo lokupholisa. Umshini wokusebenza uzovula iphampu lokupholisa futhi ulungise indawo yokuphuma kwepayipi lokupholisa ukuze ihambisane nomsebenzi wokupholisa.
8. Ngemuva kokuphothula ukucubungula, vala i-radial drill, bese usula ingalo yesisindo kanye nekholamu yomhlahlandlela wesitimela nge-gauze elicolekileyo kanye namafutha njalo ukugwema ukulimala.
Uma udinga imibhalo yokusebenza kwe-PDF noma ye-PPT mayelana nomshini wokubhola osabalalayo, sicela uxhumane nabasebenzi bokuthengisa
Osabalalayo imishini umshini imishini
Mayelana nentengo yomshini wokubhola osabalalayo, ngokusho kwamamodeli ahlukahlukene, inani lihluka kakhulu. Ngokucaciswa komshini ojwayelekile we-radial drilling, ibanga lentengo elinganiselwa ku-3000USD ~ 50000USD. Kukhudlwana ivolumu yokuthenga, intengo ishibhile. Futhi ukwehla kwesilinganiso sokushintshaniswa kuzophinde kuthinte intengo. Uma udinga inani elifanele, udinga ukuxhumana nomthengisi ukuthola isiqinisekiso.
Uyini umshini wokubhola osabalalayo? izingxenye, ezakhiwe, izingxenye.
Isithombe esingakwesobunxele ngumdwebo wohlaka lomshini wokucindezela ingalo osabalalayo, owakhiwe kakhulu izingxenye eziyisithupha:
Isetshenziselwa ukuxhasa nokulungisa ithuluzi lomshini. Ikholomu elime mpo lifakwe esisekelweni, esidinga ukulungiswa phansi ukuze kuqinisekiswe ukuzinza kwe-radial drill.
2 Ingalo ye-radial
Ingalo ye-radial egibele kukholamu evundlile ukuxhasa ukunyakaza kwesobunxele nangakwesokudla kwebhokisi lokuphotha. Ingalo ye-Radial ingazungeziswa ikholomu futhi yingxenye eyinhloko ye-radial arm drill, evumela opharetha ukuthi bayithole ngokuya ngesimo okufanele senziwe ngomshini
Ikholomu igibele esisekelweni, isekela ukuhamba kwengalo esabalalayo. Isikulufu sokuhola singashayela ikholomu phezulu naphansi
4 Ibhokisi lokuphotha
Izinkinobho ezinkulu zokusebenza zifakiwe ebhokisini lokuphotha. U-opharetha ulawula ukujikeleza kwebhola lokubhola ngebhokisi lokuphotha.
5 Itafula lokuhambisa
Ukuhambisa okusebenzayo nge-T groove yokulungisa okokusebenza
Kukhona ikakhulukazi ama-motors amabili, eyodwa ngenhla kwekholomu, ebhekele ukuphakanyiswa kwengalo yomsakazo. Enye ngenhla kwebhokisi lokuphotha, elibhekele ukujikeleza kokuphotha.